Mety hampigadra ny fanamboamboarana saripika ho an’ny mpamaham-bolongana Tanzaniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2009 8:36 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, বাংলা, polski, Español, English
The Nairobi Chronicle no mitatitra fa mety higadra ny mpamaham-bolongana Tanzaniana iray noho ny namboamboarany sary iray ahitana ny filoha Tanzaniana Jakaya Kikwete ho manao fihetsika mamoha fady (ara-pananahana).
Araka ny nolazain'ny Habari Leo , gazety Tanzaniana[sw] iray dia mitady fiarahamiasa amin'ny Interpol ny polisy ao an-toerana hitadiavana ny tompony sy ny mpamoaka (sary sy lahatsoratra) ao amin'io bolongana io.
Niseho masoandro noho ny famoahana ny tsahotsaho malaza any amin'ny Tanzaniana ampielezana manerantany, tantara mahamenatra nefa milaza anaran'olona mazava sy famoahana sarin'olona malaza miboridana ary sarin'olona manao firaisana ara-nofo ny Ze utamu (www.zeutamu.com), izay heverina ho bolongana tanzaniana mampiady hevitra indrindra. Raha nahasintona mpijery maro izy dia nahazo fanakianana mavaivay ihany koa.
Misy moa ny mpamaham-bolongana sasany milaza fa tsy niraharaha ny fisiany mihitsy ny fitondrana raha sary sy tantaran'olona tsotra no nivoaka tao amin'ny ze utamu. Fanehoan-kevitra iray tao amin'ny Watanzania Oslo blog iza namoaka ny lahatsoratra tao amin'ny Habari Leo mikasika ny fikarohan'ny polisy ny tompon'ny bolongana ze utamu no niteny hoe:
Efa ela ny Ze utamu no nanao izay nampahamenatra olon-tsotra maro rehefa navoaka tsy nahazoana alalana ny sarin'izy ireo. Maro tamin'ny sary moa no sarin'olona miboridana nefa na dia ny sary tsotra (tsy miboridana) aza dia tsy nahazoana alalana akory. Marina ve fa noho ny famoahana ny sarin'ny filoha no nahataitra ny fitondram-panjakana ka nampikorapaka azy haka fepetra hitady ny tompon'ny bolongana? […] Fihatsarambelatsihy izany, rehefa manala baraka dia manala baraka, na olo-tsotra no tratran'izany na Olobe na Filoham-pirenena.
Navoitran'i Happy Katabazi io teboka io:
… Nalaza noho ny famoahana sarin'olona avy amin'ny sehatra rehetra miboridana ny www.zeutamu.com, ary avelany miresaka fiainana manokan'ny olona ny mpamaky azy…
Fony nalaza ny vohikala dia tsy nanao na inona na inona loatra ny fitondrana mandrapahatongan'ity herinandro ity rehefa namoaka ny sary fanalam-baraka ny filohantsika ry zareo. Amin'izao fotoana izao moa dia efa arahi-maso ity vohikala ity, ary tsy mety hisokatra intsony izy na dia tendrena (tsindriana) aza ny rohiny.
Efa nisy ny mpamaham-bolongana no nanomboka nanao fanentanana hampitsaharana ity bolongana ze utamu tahaka ny Anti-utamu [sw] ohatra tamin'ny fotoana nampalaza azy.
Na dia mbola eo ampikarohana aza ny polisy ary maro ny mpijery ny Ze Utamu nialoha ny nanjavonany, dia sarotra ny mahita ny fanohanan'ny mpamaham-bolongana na mpamaky azy amin'izao fotoana anoratana izao aloha.